Uma hop isitimela e Brussels uzothola ngokwakho Knokke-Heist emhlabeni 50 Ngemva kwemizuzu engu-. Lapha akukho eyodwa nje, kodwa 5 amabhishi amahle elinde wena. Le ndawo inokuthize kwawo wonke umuntu, kufaka phakathi i- Indawo yokudlala igalofu, art zemibukiso, kwekhasino, isikhungo samasiko, kanye ne indawo yemvelo emangalisayo kubizwe uZwin. Njengoba sinezinto eziningi kangaka ukwenza lokhu kuyiholide lolwandle kuwufanele ukuthatha.
Lokhu kumele kube oyinhloko lolwandle yendawo Belgium kwabanye fun umndeni. Baziwa kakhulu ngokungathathi-uhla yayo ebanzi amanzi ezemidlalo ezifana egwedla nokubhukuda, isikebhe uhambo, ngomkhumbi, inhlanzi, i-wave carting, nokuntweza, izindawo kanye eziningi zokuzijabulisa ogwini kanye ukuvakasha traffic khulula, Nieuwpoort linikeza okuthile ukuze wonke umuntu. Lokhu edolobheni kulula ukufinyelela kusuka Brussels futhi emfushane ngesitimela uzothola wena khona.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeach-holidays-by-train-in-belgium%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#lolwandle iholide imvuenline